eHimalaya Online || News from nepal » “त्यसैले तीन खान मध्ये मलाई सलमानसँग ड,र लाग्छ ।” अनुश्का शर्माले खोलिन रहस्य ।
“त्यसैले तीन खान मध्ये मलाई सलमानसँग ड,र लाग्छ ।” अनुश्का शर्माले खोलिन रहस्य ।
२०७८ जेठ १८ गते मङ्गलबार ०२:४०
भारतीय क्रिकेट टीमका कप्तान विराट कोहलीकी पत्नी अनुष्का शर्मा बलिउडको दबंग अर्थात् सलमान खानसँग काम गर्न डराउँछिन्। बलिउडमा धेरै हिट फिल्म दिएकी अनुष्का शर्माले यो रहस्य हास्य कलाकार र अभिनेता कपिल शर्माको कार्यक्रम 'द कपिल...
भारतीय क्रिकेट टीमका कप्तान विराट कोहलीकी पत्नी अनुष्का शर्मा बलिउडको दबंग अर्थात् सलमान खानसँग काम गर्न डराउँछिन्। बलिउडमा धेरै हिट फिल्म दिएकी अनुष्का शर्माले यो रहस्य हास्य कलाकार र अभिनेता कपिल शर्माको कार्यक्रम ‘द कपिल शर्मा शो’ मा खोलेकी थिइन् । विशेष कुरा यो हो कि यस कार्यक्रममा सलमान खान पनि उपस्थित थिए र अनुष्काले उनलाई भने।
सलमान बाहेक, अनुष्का शर्माले बलिउड स्टार आमिर खान र शाहरुख खानसँग फिल्महरू पनि गरिसकेकी छिन र उनीहरूसंग्को चलचित्रहरू पनि निकै हिट थिए। शो को समयमा कपिल नवजोत सिंह सिद्धूतिर फर्किए र भने, ‘तपाईंलाई थाहा छ अनुष्काले शाहरुख भाईलाई फिल्म रब ने बना दी जोडी फिल्ममा बाइकको पछाडि बस्न लगाए। उनले आमिर खान सरलाई पीकेमा स्कूटरको पछाडि बस्न लगाए। त्यसपछि सुल्तानमा उनी मोटरसाइकलमा सलमान भाईलाई पनि पछाडी बस्न लगाइन ।
त्यसै क्रममा कपिलले अनुष्कालाई अर्को प्रश्न सोधे । उनले सोधे, ‘अनुष्का तपाईले भनेको जस्तो तपाईंले शाहरुख भाई, आमिर भाई र सलमान भाईसँग काम गर्नुभयो। तसर्थ काम गर्न तपाईलाई सबैभन्दा ड,र कोसँग लाग्छ ? मलाई भन्नुहोस । ‘यसमा अनुष्काले भनिन, “सलमान खानसँग।” कपिलले सोधे, “तपाईं उहाँसँग काम गर्न किन ड,राउ नुहुन्छ?”
अनुष्काले भनिन्, ‘मलाई थाहा छैन। मलाई लाग्छ कि म यो प्रश्नको उत्तर मेरो दिमागमा खोज्दैछु। म विश्वास गर्दछु कि म सलमानबाट धेरै घनिष्ठ हुन सक्छु। ”यसपछि अनुष्काले आफैले कपिललाई सोधे कि इन्तिमेडाटीड लाई हिन्दीमा के भनिन्छ? कपिलले भने, ‘मलाई के थाहा? तिमीलाई थाहा छ मलाई पनि भन्नुहोस्। ” इन्तिमेडाटीड को अर्थ कसैलाई ध;म्काउनु हो। यसको अर्थ अनुष्कालाई सलमानको उक्त बानी देखि डर लाग्ने बताईन ।
प्रकाशित मिति २०७८ जेठ १८ गते मङ्गलबार ०२:४०